Dalban Xaaladda hadda
In shabakad isgaarsiinta, waxaa jira saldhiga badan qaybiyey dalkii oo dhan, iyo dad badan oo iyaga ka mid ah waxay ku yaalaan buuraha sare, ay adag tahay in dayactirka, dayactirka The dhaqanka by on ilaalinta markeeda qaadataa shaqaale badan, khayraadka dhaqaale, iyo isku halaynta saboolka ah iyo waqtiyeynta. Si loo xaqiijiyo in hawlgalka caadiga ah ee network ee Shiinaha, shuruudaha sare ee qalabka xoog iyo nidaamka matoor la sara kiciyaa.
Shuruudahaas waxaa ka mid ah: Remote socodka qalabka ay beeluhu ku, qalabka isgaarsiinta, yaraynta kharashka dayactirka, iyo hubinta shuruudaha shaqada dhawaaqa nidaamka si loo kordhiyo hufnaanta shaqada oo dhamaystiran.
nidaamka la socodka Base Transceiver Site waa nidaam dhamaystiran isku xogta (sida albaabka magnet xaaladda shidma (maamulka galo) heerkulka, qoyaan, awood, qaboojiye, image, iwm), ka shidma helay oo lagu kala qaado via terminal isgaarsiinta xarunta, si ay ula socdaan deegaanka daarmayaay'e, xaaladda xoog iyo heegan ee waqtiga dhabta ah.
Site deegaanka fog socodka
Site la socodka isticmaalka tamarta |
La socodka awood qaybinta Site
maamulka shaqaalaha Site
qabashada xaaladaha degdegga ah Site iyo maamulka Brøndby
hawlgalka site & kharashka maamulka
Diyaarso dayactirka qalabka ee jadwalka
Supply shidaalka ee waqtiga
yaree ee shidaalka iyo isticmaalka kale ee tamarta
Ilaali hanti muhiim ah in goobta
Heerkulka & Uumi shidma